Etu esi eji Mgbasa Ozi StumbleUpon na StumbleUpon | Martech Zone
Ikekwe, usoro mgbasa ozi na-achọpụta ihe na ebe nrụọrụ anyị achọpụtara nke na-adọta okporo ụzọ maka saịtị nke anyị na ndị ahịa anyị StumbleUpon. StumbleUpon nwere ihe karịrị nde mmadụ iri atọ. StumbleUpon na-enye ma ahụmịhe onye ọrụ nke ahịhịa yana ọrụ nchọta a kwụrụ ụgwọ, Mgbasa ozi StumbleUpon.
Ọ bụ usoro ikpo okwu mara mma nke na-eri ahụ nke na-eme ụfọdụ mmekọrịta miri emi na ndị ọrụ ya. Onu ogugu nke ndi dara ada bu nwanyi 30 nkeji, nkeji 22 maka umu nwoke. N'ezie, 15% nke ndị na-ere ahịa B2B na-eji StumbleUpon kesaa ọdịnaya ha, gụnyere ụlọ ọrụ anyị! Na infographics anyị na-ekerịta na StumbleUpon rụrụ nke ọma.
Gịnị bụ StumbleUpon?
Ndị ọrụ debanyere StumbleUpon na, ka ha nyefere, dị ka, na-enweghị mmasị na ọdịnaya, usoro na-ewuli a omenala dara profaịlụ nke na-eweta ọdịnaya ọhụrụ dabere na mmasị ha. Nwere ike ịgbaso ndị ọrụ StumbleUpon ndị ọzọ iji hụ ihe ha na-ekerịta. You nwere ike iji ya dị ka saịtị ndebanye aha site na ịchekwa ntinye gị na listi.
Nyefee na StumbleUpon
Isi nke ikpo okwu bụ bọtịnụ Stumble nke na-enyere onye ọrụ aka ịmalite ngwa ngwa site na nkwenye ọdịnaya. Ka ị na-eji StumbleUpon eme ihe, ọ ka mma ị na-atụ aro ka ọ na-enye gị. StumbleUpon na-enyekwa ngwa mkpanaaka na mbadamba yana mmegharị ihe nchọgharị.
Etu esi eji StumbleUpon
Ozugbo i debanyere aha ma banye, StumbleUpon na-ekwusi menu igodo dị mfe n'elu ọdịnaya. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịgbakwunye ibe edokọbara na ndepụta, kesaa ibe ahụ na mmadụ, nyocha ihe ndị na-amasị ya, enweghị mmasị (isi mkpịsị aka), dị ka (isi mkpịsị aka elu) ma ọ bụ Kụọ ngọngọ iji kwado nchọta ọzọ. I nwekwara ike ịhụ nkọwa na iche na saịtị na onye mmasị na peeji nke.
Gịnị bụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi?
na Mgbasa ozi StumbleUpon, ndị nkwusa nwere ike nyefere ọdịnaya ma kwụọ ụgwọ iji gosipụta ọdịnaya ahụ n'ime iyi StumbleUpon nke ọdịnaya ejiri ahaziri onye ọrụ. Ndị mgbasa ozi nwere ike ịdakwasị ndị na-asụ ngọngọ site na afọ, okike, ọnọdụ, ngwaọrụ, ngwungwu ndị nwere mmasị na mbụ ma ọ bụ họrọ site na 500 ụdị mmasị zuru oke. Ikekwe ihe pụrụ iche gbasara Mgbasa ozi StumbleUpon bụ na ọdịnaya gị nwere ike iwepụ nke ọma yana site na ịkwụ ụgwọ echiche - na-enye gị visibiliti maka ego gị ma ọ bụrụ na ọdịnaya ahụ na-akpali oke.
E nwere ụzọ ọtụtụ saịtị mgbasa ozi mmekọrịta na ị nwere ike ghara iji ndị kachasị mma ma ọ bụ nweta nkwupụta kachasị. StumbleUpon na-abụkarị isi mmalite emere maka okporo ụzọ; ọ naghị etu ọnụ otu olu ọrụ dịka nnukwu ụmụ nwoke - Facebook na Twitter. N'ezie ọ nwere ụfọdụ mmegharị ị kwesịrị ịlele. Infographic a ga - egosi gị otu ị ga - esi jiri StumbleUpon mee ihe iji chụpụ ahịa na ịzụ ahịa ọdịnaya gị. Cent Muruganandam, Nzọpụ gị site na 9 ruo 5.
Dabere na Ekekọrịta, StumbleUpon na-aga n'ihu na-ebufe ọtụtụ okporo ụzọ karịa usoro ntanetị ndị ọzọ. Buru n'uche omume nke ịsụ ngọngọ nwere ike ịchụ ọtụtụ nleta mana obere oge na saịtị na ọtụtụ ụzọ ọpụpụ, agbanyeghị!
Nke a bụ nnukwu infographic si Eszọ mgbapụ gị si 9 gaa 5 na a siri ike nnyocha nke leveraging StumbleUpon maka gá »‹ n'ihu ahá »‹ a ahia.
Tags: Cent Muruganandamka esi eji stumbleupononyekekemgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụsụọ ngọngọstumbleupon mgbasa ozistumbleupon ahịastumbleupon Ntuziaka òkèstumbleupon okporo ụzọ referralsKedu ihe ịsụ ngọngọEszọ mgbapụ gị si 9 gaa 5